Netflix၊ Disney +, Apple TV + နှင့် Prime video: SVoD အသစ်အဆန်းများသည် ၂၀၂၀ သြဂုတ်လတွင်ရောက်ရှိလာသည် - teles relay
Netflix၊ Disney +, Apple TV + နှင့် Prime video: SVoD အသစ်အဆန်းများသည် ၂၀၂၀ သြဂုတ်လတွင်ရောက်မည်
By ချစ်ချစ် On ဇူလိုင်လ 27, 2020
နွေရာသီအပြည့်အဝလွှဲ၌တည်ရှိ၏, နှင့် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာပလက်ဖောင်းများ သြဂုတ်လ၏ဤလအတွက်သာယာတဲ့နှုန်းကိုကျင့်သုံးနေပုံရသည်။
ခက်ခဲသောလများပြီးနောက်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံများစွာအတွက်ခက်ခဲမှုများထပ်မံကြုံတွေ့ရပြီးနောက် Netflix၊ Amazon, Apple နှင့် Disney တို့သည်ယခုလအတွင်းလေထုကိုအေးအေးဆေးဆေးထားနိုင်ရန်သေချာသည့်တန်ဖိုးများနှင့်အလင်းရောင်အသစ်များပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လောင်းကစားနေကြသည်။ သို့သော်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောနိုင်ငံရေးရာသီဥတုသည်ကမ္ဘာ့အခြေအနေအပေါ်အလင်းဖြာပေးသည့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များဖြန့်ဝေရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းများသို့လည်းရောက်ရှိနေသည်။
စီမံကိန်းပါဝါ - Netflix
တီဗီရှေ့တွင်အနားယူရန်အတွက် Jamie Foxx ဝတ်ဆင်ထားသော superheroic ပုံပြင်ထက်အဘယ်အရာကပိုကောင်းမည်နည်း။ "ဘာမှမ» Netflix ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် စီမံကိန်းပါဝါ အမျိုးအစားများ၏မြစ်ဆုံမှာရုပ်ရှင်။
၎င်းသည်ကျပန်းစူပါပါဝါများကိုသောက်သုံးနေသူများအားပေးသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဆေးလုံးသည် New Orleans တွင်စတင်ပျံ့နှံ့လာသောအခါရဲ (Joseh Gordon-Levitt) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ (Dominique Fishback) နှင့်ဝါရင့် (Jamie Foxx) တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းလာသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဤသစ်ကိုမျိုး၏သဲလွန်စ။
စီမံကိန်းပါဝါ, Netflix ကသြဂုတ်လ 14 ရက်နေ့တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်, Immigration Land - Netflix
မြင့်မားသောနိုင်ငံရေးနှင့်လက်ရှိ docu-series, အမေရိကန်, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏မြေ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများ၊ နယ်စပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နေထိုင်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုသူများ၏ဒါရိုက်တာများ Shaul Schwarz နှင့် Christina Clusiau တို့၏သုံးနှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဝိသေသလက္ခဏာပြoverနာများနှင့် ပတ်သတ်၍ သူ့ဟာသူဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်သောအမေရိကန်၏အိပ်မက်ကိုထောက်ခံအားပေးသည့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် "သူတို့ကိုငါတို့ကိုဆန့်ကျင်»ဒီဇာတ်လမ်းတွဲခြောက်ခုမှမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်အမေရိကန်၏အခြေအနေကိုခါးသီးစွာလေ့လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည်၎င်း၏ရှေ့ဆောင်များ၏မျိုးကွဲများ၏မူလအစအပေါ်တိကျစွာတည်ဆောက်ခဲ့မှတ်မိဖို့မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ။
အမေရိကန်, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏မြေ, Netflix ကသြဂုတ်လ3ရက်နေ့တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယောက်ျားလေးများပြည်နယ် - Apple TV +
Jesse Moss နှင့် Amanda McBaine တို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်အလွန်ပြတ်သားသော A24 ၏ဖြန့်ဝေမှုကြောင့်တက္ကဆက်ဆယ်ကျော်သက် ၁,၁၀၀ ၏ထောင်ချောက်အတွင်းမှတဆင့်အစိုးရကိုတည်ဆောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
တစ် ဦး တည်းသာအောင်ပွဲပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်, သူ၏ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့်တစ် ဦး အပူယှဉ်ပြိုင်မှု။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသော Sundance ပွဲတော်တွင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ကားသည်ဂျူရီလူကြီးများကိုအထူးချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ယောက်ျားလေးများပြည်နယ်, သြဂုတ်လ 14 ရက်နေ့တွင် Apple TV + တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Hoops (ရာသီ 1) - Netflix
အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ဤကာတွန်းစီးရီးတွင်ဘတ်စကက်ဘောနည်းပြသည်မိမိကိုယ်ကိုထိပ်ဆုံးသို့ ဦး တည်ရန်စိန်ခေါ်သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်အသင်း၏ခေါင်းဆောင်တွင်မိမိကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ Jake Johnson မှကစားသောဇာတ်ကောင်အတွက်နည်းတစ်နည်း (နယူးမိန်းကလေး) မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်သူ့ဘဝကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
hoopsNetflix ၏သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်ရာသီ ၁ တွင်ရနိုင်သည်။
ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt: Kimmy vs. သိက္ခာ - Netflix
ဒီအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဇာတ်လမ်းကို (နောက်မေလတွင်မျှော်လင့်ခဲ့သည်) လောင်ကျွမ်းမှုအနည်းငယ်နှေးကွေးပြီးနောက် Bandersnatch Tina Fey စီးရီးလေးရာသီ၏ပရိသတ်များအတွက်အပိုဆောင်းအားရစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Netflix reveals its 10 most-watched original movies of all time –…
Netflix သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မူရင်းရုပ်ရှင်များနှင့်ပြပွဲအသစ် ၅၂ ခုကိုပွဲ ဦး ထွက်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာများစွာသောစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသော Netflix နှင့်ပတ်သက်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt: Kimmy vs. သိက္ခာ, Netflix အပေါ်သြဂုတ်လ5ရရှိနိုင်ပါ။
မိုး (ရာသီ ၃) - Netflix
နွေရာသီအပူချိန်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုအေးစေသည့်အလား Netflix သည်၎င်း၏ဒိန်းမတ်စီးရီးကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် အဆိုပါမိုး သြဂုတ်လအတွက်နောက်ဆုံးရာသီ။
စကင်ဒီနေးဗီးယားလူ ဦး ရေအကြီးအကျယ်ရွာသွန်းပြီးနောက်ရွာလူကြီးနှစ် ဦး သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်မည်သည့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြသည်။
အဆိုပါမိုးသြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့ Netflix တွင်နောက်ဆုံးရာသီရရှိနိုင်သည်။
Narnia Trilogy - ဒစ္စနေး +
ယခုလအတွင်းမူရင်းအကြောင်းအရာအသစ်ကိုကျော်သွားကာ Disney + သည်သုံးဆယ့်သုံးဆင့်၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းကို၎င်း၏ကက်တလောက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိမ့်မည် Narnia ၏ရာဇဝင်ချုပ်: Dawn Treader Odyssey.
သို့တိုင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၏အဓိကအကြောင်းအရာပေါ်တွင်ဒစ္စနေး + သည်စီးရီး၏ပထမ ဦး ဆုံးရာသီသုံးခုကိုလည်းအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည် ရှေးရှေးတုန်းက ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။
Narnia ၏ရာဇဝင်, trilogy ပာ +ဂုတ် ၇ ရက်တွင် Disney + တွင်ရနိုင်သည်။
3% (ရာသီ ၄) - Netflix
ပြီးနောက် အဆိုပါမိုးNetflix သည်သြဂုတ်လတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်နောက်ထပ်နှုတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ The Screen Watch ၏ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ခဲ့သည့်ဘရာဇီးသည်းထိတ်ရင်ဖိုစီးရီးသည်စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးရာသီတွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
၃%၊ Netflix တွင်သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နောက်ဆုံးရရာသီဖြစ်သည်။
Biohackers (ရာသီ ၁) - Netflix
ဒီဂျာမန်စီးရီးအသစ်တွေမှာသူရဲ့မိသားစုအဖြစ်ဆိုးအတွက်တာဝန်ရှိသူရဲ့ခြေရာကိုနင်းမိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဟာမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုယူရန်ကြိုးပမ်းနေသောအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်အောင်မြင်သော Techno-Thriller ဓာတ်ပုံ။
ဇီဝဗေဒNetflix ၏သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်ရာသီ ၁ တွင်ရနိုင်သည်။
Fast and Furious 8 - Netflix
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီနွေရာသီကရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာဘယ်အခိုက်အတန့်ကိုမှကျွန်တော်မွေ့လျော်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် Netflix ကသူ့ရဲ့ catalog ထဲကို Saga ရဲ့အရင်နှစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေါင်းထည့်လိုက်တယ်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့် Furious.
Fast & Furious 8, Netflix ကသြဂုတ်လ 16 ရက်နေ့တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပြီးတော့၊ ၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လမှာဘယ်ရုပ်ရှင်၊ စီးရီး၊
ချစ်ချစ် 839 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
ဆွစ်ဇာလန် - Jean-Pierre Nsaméသည်သူ၏ ၃၀ မြောက်ဂိုးကိုရမှတ်နှင့်လိဂ်စံချိန်နှင့်ကိုက်ညီသည်
Tech: ၂၀၂၀ မှာအကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာမော်ဒယ်လ် ၄ ခု
Netflix သည်၎င်း၏အချိန်ကာလအကြာဆုံးကြည့်ရှုခဲ့သည့် ၁၀ ယောက် - BGR ကိုဖော်ပြသည်
Tony Stark ကိုပြန်လာတဲ့Marရာမအံ့ story စရာဇာတ်လမ်းက Steve Rogers ပါလိမ့်မယ်။
Netflix သည် ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလတွင်မူရင်းရုပ်ရှင်များနှင့်ပြပွဲအသစ် ၅၂ ခုကိုပွဲ ဦး ထွက်ပြသလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး Netflix ပြိုင်ဘက်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၅၄ ခုထပ်တိုးနေသည်။